रामेश - कान्तिपुर समाचार
रामेशका लेखहरु :
२०३३ साल, मञ्जुल र म धनकुटा–धरानका केही ठाउँतिर सासाना गीति कार्यक्रमहरू दिएर फर्केका हुन्छौं । धरानको तातो मध्याह्नमा कोही साथीले भने, ‘ए तिमीहरूजस्तै गीत गाउने एक जना गायक कहिलेकाहीँ यतातिर झुल्किन्छन्, भेटघाट गर न ।’ केही दिनपछि खबर आयो, ‘जेबी धरान आएका छन् ।’ साथीहरूले भेट गराए । गाउँले पाराको साथी, सोझो, निश्छल, मनको कुरा सजिलोसँग गर्ने !
ज्ञानु : ५० वर्षअघि, ५० वर्षपछि !
टेबहालको एउटा कोठा । कोठा भाडा महिनाको ३५ रुपैयाँ । एक जनाको आयस्ताले नभ्याउने भएकाले तीन जना साथीहरू मिलेर लिएको । नयाँसडकछेउको डेरा । साँझ यसो न्युरोड घुमेपछि हाम्रो कोठामा सुस्ताउन आइपुग्थे किसिम किसिमका साथीहरू ।